Duplicati fampiharana tsara hanatanterahana mofomamy amin'ny rafitra | Avy amin'ny Linux
Duplicati fampiharana tsara hanatanterahana mofomamy ao amin'ny rafitrao
Betsaka ny olona tsy mazàna manao backup matetika, satria sarotra ny fitaovana isan-karazany amin'ity asa ity na satria tsy ampy ny fotoana ananany. Izany no antony hiresahantsika anio momba ny fitaovana tsotra nefa mahery izay manampy antsika amin'ny asa ity.
Ny fitaovana horesahintsika anio dia Duplicati. Ity dia fitaovana tena tsotra ary miaraka amin'izay koa afaka mamaha ny olanao famerenana.
1 Momba an'i Duplicati
2 Ahoana ny fametrahana Duplicati amin'ny Linux?
Momba an'i Duplicati
miverina indroa dia loharano misokatra ary manana fahazoan-dàlana ambanin'ny (LGPL), Duplicati dia voasoratra amin'ny C # ary azo alaina amin'ny Windows, Linux, ary Mac OS X, miaraka amin'ny fandikan-teny amin'ny teny anglisy, espaniola, frantsay, danoà, portogey, italianina ary sinoa.
ankehitriny mpanjifa backup maimaimpoana izy io amin'ny ankapobeny izay mitahiry amin'ny fomba azo antoka amin'ny alàlan'ny encryption, backup backup, serivisy cloud fitehirizana voafehy ary mpizara rakitra lavitra.
Miara-miasa amin'ny Amazon S3, Windows Live SkyDrive (OneDrive), Google Drive (Google Docs), Rackspace Cloud File na WebDAV, SSH, FTP (sy maro hafa).
Duplicati dia manana rafitra fandaharam-potoana ao anatiny, noho izany dia mora ny manana backup matetika hatramin'izao.
Ankoatra izany, ny programa dia mampiasa famatrarana rakitra ary afaka mitahiry backup fanampiny hamonjy habaka fitehirizana sy fantsom-pifandraisana.
Duplicati dia natsangana niaraka tamin'ny encryption AES-256 ary ny sonia backup dia azo soniavina amin'ny alàlan'ny fampiasana ny GNU Privacy Guard.
Ny fampiasa amin'ny rindrambaiko nomaniny ho solon'izay dia:
Fampiharana lampihazo miampita. Azo alaina ho an'ny rafitra fiasa lehibe, Gnu / Linux, Microsoft Windows, MacOS.
Niaiky toy izao i protokol web samihafa ho an'ny backup, izany hoe WebDAV, SSH, FTP, sns.
Ity fampiharana ity dia mampiasa ny Fampiharana AES-256 hanafina ny angona backup.
Manohana isan-karazany cloud services hitahiry data: Google Drive, Mega, Amazon Cloud Drive, sns.
Mamela ny famerenan'ny lahatahiry, ny karazana antontan-taratasy toy ny antontan-taratasy na sary, na ny fitsipika sivana fanao.
Sivana, famafana ny lalàna, mifidy safidy ary fantsom-pifandraisana sns.
Manjary iray fampiharana an-tranonkala Azontsika atao ny miditra amin'ny rindrambaiko na aiza na aiza, na avy amin'ny finday aza.
Farany fa tsy latsa-danja, Duplicati dia manolotra safidy sy fanovana isan-karazany, toy ny sivana, ny fitsipiky ny fanilihana, ny famindrana ary ny safidin'ny bandwidth ho fanatanterahana backup ho an'ny tanjona manokana.
Ahoana ny fametrahana Duplicati amin'ny Linux?
Ho an'ireo izay liana amin'ny fametrahana ity fitaovana ity amin'ny fizarana Linux azy, Azon'izy ireo atao izany amin'ny fanarahana ny torolalana zarainay etsy ambany.
Ny zavatra voalohany tokony hataontsika dia Mandehana any amin'ny tranokalan'ny rindrambaiko izay ahafahantsika mahazo ny kinova farany miorina amin'ny fizarana fisintomana. Azontsika atao izany ao amin'ny rohy manaraka
Ho an'ny raharaha Ireo mpampiasa Debian, Ubuntu, Linux Mint ary ny derivatives dia afaka mametraka ity rindranasa ity amin'ny alàlan'ny fampidinana ny fonosana deba farany azo antoka (amin'izao fotoana izao dia ny kinova 2.0.4.15) izay ampidinintsika miaraka amin'ny baiko wget toy izao:
Raha vantany vao vita ny fampidinana dia azonao atao ny mametraka ny fonosana vao napetraka miaraka amin'ny mpitantana fonosana tianao indrindra na avy amin'ny terminal mihitsy amin'ny fanoratana ny baiko:
sudo dpkg -i duplicati_2.0.4.15-1_all.deb
Ary raha sendra olana amin'ny fiankinan-doha dia voavaha amin'ny baiko ireo:
Ho an'ny tranga izay Fedora, CentOS, RHEL, openSUSE na rafitra hafa misy mpampiasa RPM dia hampidina ny fonosana RPM miaraka amin'ny:
Ary farany hanao ny fametrahana amin'ny alàlan'ny baiko isika:
sudo rpm -i duplicati-2.0.4.15-2.0.4.15_canary_20190206.noarch.rpm
Farany, ho an'iza Arch Linux, Manjaro Linux, Antergos na mpampiasa fizarana Arch Linux hafa afaka hametraka ity rindranasa ity avy amin'ny tahiry AUR.
Tokony hanana mpamosavy AUR fotsiny izy ireo ary avelao halefa ao amin'ny rafitr'izy ireo ity tahiry ity. Raha tsy manana an'io ianao dia afaka manatona ny lahatsoratra manaraka.
Raha te-hametraka dia mila mihazakazaka izao baiko manaraka izao ianao:
yay -S duplicati-latest
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Duplicati fampiharana tsara hanatanterahana mofomamy ao amin'ny rafitrao
Leo Jimenez dia hoy izy:
Nandinika ilay fitaovana nandritra ny herinandro maromaro aho. Misongadina izy amin'ny maha OpenSource anao, maimaimpoana, endrika maro samihafa, toerana maro ary tsotra. Mamela ny famerenam-bidy fanampiny ary ny famerenana ireo rakitra dia mora ihany koa, na amin'ny làlana voalohany na amin'ny lahatahiry hafa.
Valiny tamin'i Leo Jiménez
DarkoFlores dia hoy izy:
Miantso antso Restic aho izao. Izy io dia fitaovana "deduplication", mitovy amin'ny borgbackup, rindrambaiko maimaim-poana, voasoratra amin'ny go, multiplatform, haingana ary ny fomba fanaovana backup dia mety tokoa. Azonao atao ny mampiasa tahiry tokana ho an'ny mpampiantrano marobe. Herintaona no nampiasako ity fitaovana ity ary tena atoro ahy tokoa. Tena tsara. https://restic.net/
Mamaly an'i DarkoFlores
GNOME 3.32: kinova vaovao amin'ny tontolon'ny birao misy fahagagana
SIGESP: Rafitra fitantanana Public Integrated - Rindrambaiko maimaim-poana ho an'ny orinasa tsy miankina